यस्तो छ वाग्मती नदीको उत्पत्तिको कथा ! | News Polar
Friday, January 22, 2021 / शुक्रबार ०९ माघ, २०७७
यस्तो छ वाग्मती नदीको उत्पत्तिको कथा !
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको मृगेन्द्र शिखरबाट राजधानीको सभ्यताको स्रोत वाग्मती प्रकट हुन्छ । योस्थल अहिले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको भौगोलिक सीमामा पर्दछ । नृसिंहले हिरण्यकशिपुलाई मारेपछि यसै पर्वतमा आएर मृगको ईन्द्रसमान ९सिंह० रुपको शिर धारण गरी विचरण गरेकाले मृगेन्द्र शिखर नामकरण भएको विभिन्न पुराणमा उल्लेख गरिएको छ । वाग्मती उत्पत्ति भएकाले यो स्थानलाई वाग्द्वार भनिन्छ । यहाँ भक्त प्रल्हादले एक हजार वर्षसम्म भगवान शिवजीको तपस्या गरे ।
शिवपुरीको उत्तर मुखबाट वाग्मती र दक्षिण मुखबाट विष्णुमती प्रकट भइन् । यही शिखरको पूर्व दक्षिणतिरबाट रुद्रमती ९धोबीखोला० को उत्पत्ति भएको छ । मणिचुड पर्वत ९बज्रयोगिनीको डाँडो० बाट मणिमति ९मनोहरा० उत्पन्न भएको छ । साथै उपत्यकाको विभिन्न स्थानबाट इक्षुमती ९टुकुचा०, हनुमती ९हनुमन्ते०, भद्रमती ९भातेखुशी० र प्रभावती ९नख्खुखोला० वाग्मतीमा मिसिन्छन् । वाग्मतीमा मिसिने यी सात नदीको समूहलाई सप्तमती पनि भन्ने गरिएको ‘वाग्मती काठमाडौँ सभ्यताको मुहान’ पुस्तकका लेखक एवं नेपाल सरकारका पूर्व सचिव विष्णुगोपाल रिसाल बताउनुहुन्छ ।
यसबाहेकका कोट्कुखोला, महादेवखोला, बल्खु खोला, गोदावरी खोला, चन्द्रमती, सूर्यमती, स्यालमती, नागमतीलगायत धेरै सानातिना खोला पनि सिधँै वा सहायक नदी हुँदै वाग्मतीमा मिसिन्छन् । हिमालयको काखबाट निस्केकी वाग्मती भागीरथी ९गङ्गा० भन्दा सयौँ गुणा पवित्र छिन्् भनी बराहपुराणमा उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थात् पशुपतिको समान लिङ्ग, वाग्मतीको समान नदी र गुह्येश्वरीको समान पीठ ब्रह्माण्डमा अरु छैनन् । स्कन्दपुराण नेपाल माहात्म्यको हिमवत्खण्डमा वाग्मतीको महत्व बढाउनको लागि मनोहराको सङ्गम ९दोभान० मा रहेको रुद्रधारा तीर्थले ठूलो भूमिका खेलेको उल्लेख छ ।
शास्त्रीय मान्यताअनुसार विष्णुमतीको सङ्गम टेकुदोभान र नख्खुखोला ९प्रभावती० सङ्गमको पनि ठूलो गुणगान छ । वाग्मती र नख्खुखोलाको सङ्गममा चैत्र शुक्ल अष्टमीका दिन आदिनाथलाई स्नान गराइन्छ ।
तीन वर्षअघि अखिल विश्व गायत्री परिवारले भारतको नागपुरमा आयोजना गरेको युग सृजेता सम्मेलनको समापनका अवसरमा भगीरथ पुरस्कारले सम्मान गरिएको थियो । दुवै पुरस्कार महाअभियानका तर्फबाट सफाइ अभियानकर्मी डा राजु अधिकारीले ग्रहण गर्नुभएको हो । पूर्णप्रसाद मिश्र/रासस
# स्वच्छता # वाग्मती नदी # वाग्मती # चक्रपथ # नदीनाला
प्रकाशित : पुष २८, २०७७, १७:४९:१०
शक्ति प्रदर्शनः आज प्रचण्ड-माधव समूहले एक लाख बढी कार्यकर्ता सडकमा उतार्दै
एक सय वर्षको लाल इतिहास बोकेको शाङहाई
विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले आर्थिक सुधारको निरन्तरतामा नकारात्मक प्रभाव पार्दैन –अर्थमन्त्री पौडेल
प्रेस सङ्गठनको संयोजकमा बस्नेत चयन
भारतको कर्नाटकमा जिलेटिन लोड गरिएको ट्रक विष्फोट हुँदा ८ जनाको मृत्यु
रसुवाका सबै वडामा काँग्रेसको विरोध प्रदर्शन
आज माघ ९ गते शुक्रवार शुक्ल नवमी, हेर्नुहोस् ! आजको तपाईको राशिफल